यही साता सरकारमा जाँदैछौँ : अध्यक्ष नेपाल ! « MNTVONLINE.COM
यही साता सरकारमा जाँदैछौँ : अध्यक्ष नेपाल !
अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनसम्म अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायमै राखिनेसमेत स्पष्ट पार्ने । उनले भने, “विगतको सरकारले जनताका पीडालाई राम्रोसँग सम्बोधन गरेन । अहिलेको गठबन्धनको सरकारले विगतका गल्तीलाई दोहो¥याउनु हुँदैन । गठबन्धन बलियो बनाउँदै जनताको सेवामा लाग्नु पर्दछ ।”
एमालेले देशको विकास र समृद्धिका लागि काम गरिरहेको छः विष्णु पौडेल